I-Semalt: Yiziphi Izinkinobho-Ze-Iwebhusayithi NamaDots eDarodar Futhi Ungazivimbela Kanjani?
Uma uhamba ngombiko wethrafikhi we-Google Analytics, enye yezinto okufanele uziqaphele umthombo wendlela ebonakalayo. Ngezinye izikhathi, eminye yemithombo ingase idale inani elikhulu lomgwaqo kunabanye. Ngokubheka ngokucophelela, omunye angase aqaphele ukuthi ukuhanjiswa kwenombolo kulaba ababili: i-darodar - computer rental san francisco ca.com, nezinkinobho-for-website.com. Ngaphandle kwazo ezivela emibikweni ye-GA, kunethuba lokuthi ungakaze uzwe ngalezi zindawo ngaphambili, futhi unesifiso sokuthi kungani ziletha ithrafikhi eningi.
Ukufingqa lokhu, izizinda ezimbili zisebenzisa amacebo aziwa ngokuthi ugaxekile wokudlulisela. U-Max Bell, isazi esihamba phambili esivela ku Semalt , uchaza ukuthi umqondo ngemuva kokudluliselwa kogaxekile wukuthi amasayithi athola ukudala izixhumanisi eziningi kwisizinda esisodwa kusuka kusayithi elithile abafisa ukulikhuthaza. Lapho izinjini zokusesha zikhahlela izigijimi, zithola lezi zihanjelwa zibafaka emibikweni yokugcina. Ukuphazamiseka kwalokhu ukuthi akukho mgwaqo osebenzayo futhi ungashintsha indlela umuntu enza ngayo izinqumo zewebhu.
Njengoba zonke izixhumanisi zibuyela kwisayithi ethile, umnini angase afune ukwazi ukuthi kungani isayithi lisho ithrafikhi eningi kangaka. Uma bechofoza ku-URL kumbiko we-GA, kuqondiswa kabusha kwiwebhusayithi yokudlulisela emuva, okuzobe ihumusha njengokuvakasha okusha. Ngesayithi logaxekile, i-hits ithola kubanikazi abangabonisi kahle bayimvelo.
Ngenhlanhla, ayikho ingozi engokoqobo eyenziwa kuwebhusayithi. Njengoba kushiwo ngaphambili, lifakaza yonke idatha eqoqwe ngokuphathelene nomgwaqo esakhiweni kusukela ku-messes nenombolo. Umphumela uba umbiko ophazamisekile ongafanisi isithombe sangempela salokho okuqhubekayo nesayithi. Ngokujwayelekile, amazinga wokunciphisa aphezulu ngo-100% ngesikhathi sokungena kwesayithi.
Kungaba kubalulekile ukuvimbela izinkinobho-ze-website kanye ne-darodar ukuze uthole isithombe esingokoqobo sokusebenza kwesayithi. Iningi lalezi zihloko ezihlobene nokusula inkinga kuchaza ukusetshenziswa kwesici "Bot Filtering" sici esisha ku-Google Analytics. Ngaphansi kwezilungiselelo zokubuka, i-Google yengeze ibhokisi lokuhlola elilula umsebenzisi angakhetha ukuhlola noma ukushiya ungahlosiwe. Kusuka kokuhlangenwe nakho ngalolu khetho, isiphetho salesi sihloko sinquma ukuthi inketho yokuhlunga ibhodlela ayihlungi abadlali be-spammers ababili bokudlulisela: i-darodar..com, kanye nezinkinobho-for-website.com.
Indlela engcono yokuvimbela izinkinobho-ze-website kanye nedarodar ngokuletha ithrafikhi engadingeki ukusebenzisa isihlungi esikoqobo. Sebenzisa inqubo elandelayo:
1. Vula i-Google Analytics bese uchofoza kuthebhu ye-Admin.
2. Inketho yokubuka evela kukholomu efanele kufanele ihambise ummenyu wesimanje lapho kunomthelela othi "Dala i-New View." Ochwepheshe bayeluleka ekwakheni isihlungi esingokwezifiso ngaphansi kombono ukuze ekupheleni kwenqubo, kuhlale umbono owodwa ongagciniwe onayo yonke idatha eluhlaza ukufanisa.
3. Nikeza lesi sihlungi igama.
4. Esikhathini samathebhu, khetha ukhetho olusha lwe-Filter.
5. Sebenzisa igama elihlukanisayo lesihlungi esisha.
6. Uhlobo lokuhlunga kumele lube ngokwezifiso.
7. Sebenzisa Ukudluliselwa kwenkambu Yehlunga ngaphansi kokungena bese ufaka igama lomqondisi wokuqala (izinkinobho-ze-website).
9. Phinda kusukela kwesinyathelo sesi-5 ku-darodar.com.